Park Sculpture Park wuxuu leeyahay Meel Fog ah oo loogu talogalay Horumarinta
Waxay ku taallaa dooxada River St. Croix Valley, Park Sculpture Park waa hay'ad farsamo oo aan macaash doon ahayn oo ku shaqeyneysa 43 xarumood oo dibadda lagu qurxiyo, barnaamij degenaansho firfircoon, iyo barnaamijka fananka bulshada. Jardiinadu waa bilaash waxayna u furantahay dadweynaha 365 maalmood sanadkiiba, iyada oo ka badan 100 sawir oo ay sameeyeen farshaxan-degaha. Franconia wuxuu bixiyaa tartan tartan tartan ah iyo layliyo ilaa 40 oo soo baxaya, mid dhexdhexaad ah, oo abuuray farshaxanno muuqaal sanad walba, taageeraya abuurista iyo bandhigga sawir weyn oo cajiib ah. Himilada Franconia waa inay bixiso meelo jidh ahaaneed iyo garasho leh oo ballaaran oo furan oo dhammaantood lagu dhiirigeliyo inay ka qaybqaataan geedi socodka hal-abuurka.
Franconi Sculpture Park wuxuu u adeegay sidii dhagax wax ku ool ah dhawr dhibcood oo ka mid ah xirfadlaha horumarinta farshaxanka Alex Lindsay. Lindsay ee tababarka ee Franconia ee 2008 ayaa raba inuu daneynayo farshaxanka, ugu dambeyntii wuxuu u horseeday inuu helo MFA oo ka timaada Machadka Machadka ee Cranbrook ee Michigan. Inkastoo uu ku jiro dugsiga qalinjabiyay Alex, wuxuu sahamiyey shaqadii ku lug laheyd qalabka iyo qalabaynta qalabka iyo qalabeynta. Shaqadiisu waxay ka soo baxday halkaas, isaga oo ku dhammaatay shaqadiisa Xiddig oo lagu soo bandhigay Bannaanka 54-aad ee Venedik Biennale sanadkii 2011-kii.
Alex waxaa la siiyay FSP / Jerome Fellowship Fellowship ee Franconia ee 2013 si ay u qaadaan mashruuc runtii hufan, farshaxanka casriga badan ee warbaahinta oo cinwaankeedu yahay Wadada weyn taas oo sahamisay horumarka qarniyadii qarniga 20-aad ee nidaamka waddada weyn ee waddooyinka. Wadada weyn wuxuu ka kooban yahay saddex waxyaalood oo waaweyn: jumlad bir ah oo la duubay, dhabarka dambe ee gawaarida gawaarida, iyo fiidiyow la filayo. Qalabka dhabarka gadaashiisa waxaa lagu rakibay qalab bir ah oo bir ah oo lagu shaqeynayo qalab farsamaysan oo gadaal u socdo oo dibedda gadaashiisa ku socdo hal wareeg 24 saacadood kasta. Albaabka dambe ee gawaarida sanduuqa sanduuqa ayaa furmay oo la xidhay iyada oo albaabka garaashka furan uu dhaliyey dareeraha dhaqdhaqaaqa. Booqashooyinka naqshadeynta ayaa lagu martiqaaday inuu arko fiidiyow la filayo oo ah sawirada jidadka ee wareega. Iyadoo martidu daawanayeen saadaashii, gawaarida gawaarida ah ayaa la socday iyadoo ay socotay 50 foot.
Wadada weyn waxay mataleysaa baadhitaanka Alex ee sida nidaamka waddooyinka uu u bedelay nidaamka dhaqdhaqaaqa America isagoo abuuraya qaab aan caadi ahayn oo lagu fahmo muhiimada nafsadda iyo dareenka ee wadada safarka ee bulshada Maraykanka. Wadada weyn waa meel u gaar ah degaanka Franconia ee deegaanka iyo bay'ada. Deegaanka degganaanshaha ee Franconia ayaa taageeray Alex si looga hortago qalabkan dibad-baxeed ee dibadda ah, farsamo iyo fikrado farsamo oo uu doonayo inuu raaco.